तपाइँले दिनदिनै नुहाउने गर्नुहुन्छ ? विज्ञ भन्छन् – धेरै नुहाउनु पनि राम्रो होइन – उज्यालो खबर
तपाइँले दिनदिनै नुहाउने गर्नुहुन्छ ? विज्ञ भन्छन् – धेरै नुहाउनु पनि राम्रो होइन
काठमाडौं । अमेरिकामा मात्र झन्डै दुई तिहाइ मानिसहरु हरेक दिन नुहाउने गर्दछन् । त्यहाँ दिनदिनै ननुहाउनुलाई घिन मान्ने चलनरहेको छ । तर के वास्तवमै सरसफाइका हिसाबले दैनिक नुहाउनु सबैभन्दा उत्तम हो रु कि अमेरिकीहरु यस कुरामा गलत छन् भन्नेबारे विज्ञहरुले यस्तो खुलासा गरेका छन् ।
नुहाए ननुहाएका आधारमा हामी किन अरुको मूल्यांकन गर्छौँ रु अहिलेका मानिसहरु अर्काको कमी निकाल्न, कुरा काट्न ज्यादै रुचाउँछन् । केही वर्ष अगाडि डाक्टर जेम्स हेम्ब्लिनले आफ्नो एक अध्ययनका लागि पूर्ण रुपमा नुहाउन बन्द गर्ने निर्णय गरे । आफ्नो यो रिसर्चपछि उनले ‘क्लिन’ अर्थात् सफा शिर्षकको किताब लेखे ।
उनका अनुसार अहिलेको समयमा सरसफाइका लागि भन्दा पनि अरुले के भन्लान् भन्ने डरले मानिसहरु बढी नुहाइरहेका छन् । जसले यसलाई ट्रेन्ड समान बनाइदिएको छ । तर यही शैली धेरैले जाडो महिनामा चाहिँ अपनाएका हुदैनौँ । जस्तै ग्यालअपको सर्वेक्षण अनुसार ३० प्रतिशत तिनै अमेरिकहरुले जाडोयाममा चाहिँ दिनकै नुहाउँदैनन् । र यसो गर्दा पनि सबै स्वस्थ रुपमा बाँचिरहेकी हुन्छन् । यस्तोमा सरसफाइका हिसाबले कतिसम्म नुहाउनु ठीक हो र के कुरा चाहिँ केबल बजारीकरण र ट्रेन्डका नाममा भ्रम मात्र फैलाइएको हो रु
‘द डर्ट अन क्लिन स् एन अनस्यानिटाइज्ड हिस्ट्री’ की लेखक क्याथरिन एशेनबर्ग भन्छिन्, “नुहाउने सम्बन्धी मानव इतिहास प्राचीन रोमसँग जोडिएको छ । तर रोमनहरुलाई नुहाउन एकदमै मनपर्ने भएपनि यो शब्दलाई चाहिँ सयौँ वर्षसम्म ‘फोहोर’ सँग मात्र जोड्ने गरिन्थ्यो ।
१४ औँ शताब्दीमा ब्ल्याक डेथ प्रकोप सुरु भयो , त्यसबेलाका डाक्टरहरुले तातो पानीले नुहाउनुले रोग लाग्ने खतरा झन बढ्ने विश्वास गर्दथे । तातोपानीले छालामा हुने ससाना प्वालहरु खुलाउने हुँदा त्यसैबाट रोग शरीर भित्र छिर्ने उनीहरुको तर्क थियो । अर्को चर्चित घटना भनेको फ्रान्सका राजा लुइ चौधौँले दुर्लभै नुहाउँने गर्दथे । तर यसमा उनले एकै दिनमा धेरैपटक आफ्नो पहिरन बदल्ने गर्दथे ।
उसो भए त्यो समयबाट हामी कसरी अहिले दिनदिनै नुहाउने अवस्थामा आइपुग्यौँ त रु यसमा दुई प्रमुख कारण छन् । पहिले त किटाणुबारे हामीले अनन्त ज्ञान हासिल गरिसकेका छौँ । त्यस्तै हामीसँग विगतको तुलनामा साबुन, सफा पानीको श्रोत र बाथरुमको पहुँच व्यापक भइसकेको छ । दोस्रो कारण भनेको चाहिँ यस सम्बन्धी तिव्र बजारीकरणले पनि सरसफाइको विषयलाई आवश्यकता भन्दा पनि देखाउने ट्रेन्डतर्फ लगिरहेको विज्ञ बताउँछन् ।
हाम्रो छालालाई सुरक्षित राख्न त्यसको सतहम विशेष किसिमको प्राकृतिक तेल र राम्रा ब्याक्टेरियाको उचित सन्तुलन हुन्छ । यसले हाम्रो छालालाई हानिकारक किटाणु र सुख्खापनबाट बचाइरहेको हुन्छ । तर त्यसमा केमिकलयुक्त कडा साबनु प्रयोग गर्नु या शरीरलाई घोट्ने गर्दा छालाले त्यो सतह गुमाउँछ । यसले छाला अस्वास्थकर बन्दै जान्छ भने एलर्जी गराउने किटाणुहरु पनि सजिलै संक्रमण फैलाउन सक्ने हुन्छन् ।
त्यसैगरी हाम्रो शरीरको प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई धेरै अवस्थामा छालामा बस्ने किटाणुहरुले पनि सक्रिय पारिरहेका हुन्छन् । तर तिनीहरु चाँडो पखालिनुले शरीरलाई त्यस विरुद्ध जोगाउने ।एन्डिबडिज’ उत्पादन गर्ने मौका दिँदैन ।